मनोमानी बस भाडाको अन्त्य कहिले ? - Nepal, Himalayas, political news, science & Technology, Social, sports, economy, Business, Entertainment, Interview, Audio, Video, Actor, Actress, blog
मनोमानी बस भाडाको अन्त्य कहिले ?
२–४ रुपैयाँको लागि कानूनी उपचारमा जाँदैनन् कोही
राजधानीमा चल्ने अधिकांश सार्वजनिक यातायातले पलपलमा यात्रुलाई ठगिरहेका छन् । यसको अनुगमन कसैले गरेका छैनन् । यात्रुवाहक बस, माईक्रोबस, मिनिबस तथा टेम्पोहरूले हाकाहाकी यात्रु ठग्ने गरेको तथ्य खोज्न धेरै भौतारिनु पर्दैन । तपाइँ हामी नै त्यसको साक्षी छौँ । एउटै रुटमा चल्ने एउटै प्रकृतिका सवारीमासमेत फरक–फरक समयमा (बिहान र बेलुकामा नै) फरक–फरक भाडा तिर्न परेपछि यात्रुहरू निकै मर्कामा परेका छन् । ‘चढ्यो कि १५ रुपैयाँ झर्यो’ को नीतिले त सार्वजनिक यातायात पनि मिटर ट्याक्सी जस्तै भएको छ । त्यसमा पनि आधिकारिक भाडादर बसमा नराख्ने र पार गरेको दुरीअनुसारको भाडा नलिई जति मन लाग्यो उतिनै पैसा उठाउने सहचालकहरूको प्रवृत्तिले त उपत्यकामा दैनिक लाखौँ यात्रु ठगिइरहेका छन् । जसबाट दैनिक लाखौँ रुपैयाँ यातायात व्यवसायीको हातमा पुग्ने गरेको छ । तर, यसरी खुलेआम यात्रुहरू ठगिरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय भने मुकदर्शकमात्रै बनिरहेका छन् । आखिर पीडित यात्रुको मर्म कसले बुझिदिन्छ ?
रामेछापका विन्दु श्रेष्ठ ललितपुरको कुपण्डोलमा बस्छिन् । कामको शिलशिलामा उनी सँधै माइक्रो बसमा सुनधारा पुग्नुपर्छ तर उनले एउटै सवारी साधनमा एउटै दुरीको प्राय फरक–फरक भाडा तिर्ने गरेकी छन् । रत्नपार्क–लगनखेलको रुटमा चल्ने त्यो माइक्रोबसमा बिहान एउटा भाडा त बेलुका अर्कै भाडा लिन्छन् । बसैपिछे फरक भाडा तिर्नुपरेको उनको यो गुनासो साझा समस्या हो । बिहान १५ रुपैयाँ तिरेर आएपनि कुनै बसका सहचालकले १७ रुपैयाँसम्म लिन खोज्छन् । कहिले चानचुन पैसा छैन भनेर टार्छु त कुनैले झगडा नै गर्न खोज्छन् र २ रुपैयाँ थपेरै दिने गरेको उनी बताउँछिन् । त्यस्तै भृकुटी मण्डपबाट हरेक आइतबार बालाजु जाने गरेका हेटौँडाका प्रकाश उप्रेतीले पनि तोकेभन्दा बढी भाडा निर्तुपरेको गुनासो पोख्छन् । कतिलाई त भाडा १५ रुपैयाँ मात्रै हो किन बढी चाहियो भनेपछि आफूतिर सोझो आँखाले हेर्दै नहेर्ने गरेको रोचक प्रसङ्ग पनि उनी सुनाउँछन् । कतिलाई त उनले नराम्रोसँग झपारेका पनि छन् । बस भाडा र रुट जान्ने हामीजस्ता सचेत यात्रुलाई त खुलेआम ठग्न खोज्ने यिनिहरूले सामान्य यात्रुलाई कतिसम्म ठग्दाहुन उप्रेती प्रश्न गर्छन् । त्यस्तै सजिलो र शालिन यात्रुबाहकको रुपमा चिनिने तीनपाङग्रे टेम्पोमा पनि यात्रु ठगिएका छन् । केही समय अघिसम्म टेम्पो चडेपछि १५ रुपैयाँ तिरिहाल्नुपथ्र्यो, तर अहिले माइक्रो तथा अन्य यात्रुबाहकमा १५ को सिस्टम बसेपछि उसले ‘चढ्यो कि १७’ को नीति अपनाएको छ । पुरानो बानेश्वरबाट प्रदर्शनीमार्ग हुँदै सुनधारा चल्ने टेम्पोका चालकहरूले पनि मन लाग्दो भाडा लिने गरेको यात्रुहरू बताउँछन् । १५ रुपैयाँ पनि नलाग्ने दुरी पार गर्दा पनि १७ रुपैयाँ तिर्नुपरेको गुनासो यात्रुहरूको छ । कामको शिलशिलामा प्राय त्यो रुटको टेम्पो प्रयोग गर्ने स्याङ्जाका वासु पाण्डे मध्येबानेश्वर रत्नराज्य स्कुलबाट थापा गाउँसम्म आउँदा पनि कहिले काहीँ १७ त कहिले २० रुपैयाँ भाडा तिर्नुपरेको तितो यथार्थ सुनाउँछन् । यसरी खुलेआम यात्रु ठगेको कुरा उठाउँदा तोकिएको भाडा यत्ति हो भन्दै उनीहरू झगडा गर्छन् । सम्बन्धित निकायमा जाउँ भन्छन् तर हतार भएर प्रयोग गरिने यस्ता यातायातमा ५–७ रुपैयाँ ठगिएको कुरा लिएर कानूनी उपचार खोज्ने फुर्सद कसको छ र ? यही भएर पनि उनीहरूले मनोमानी भाडा लिएको हुनसक्ने पाण्डेको बुझाई छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको भाडादर भन्दा बढी भाडा उठाउने यस्ता ठग चालक तथा सहचालक र सम्बन्धीत व्यवसायीलाईसमेत कारवाही गर्ने अख्तियारी राखेको छ, तर भाडा बढी उठाएकै निहुँमा कही कतै कारवाही भएको भने सुनिन आएको छैन । खुलेआम यात्रुलाई ठग्ने चालक तथा सहचालकलाई प्रभावकारी कारवाहीमार्फत कानूनी कठघरामा उभ्याउन जरुरी छ । विभागले ४ किलोमिटर दुरीको १५ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । ४ किलोमिटरबाट १९ किलोमिटर दुरी पार गर्दासम्म २६ रुपैयाँ र त्यो भन्दा बढी दुरीका लागि अधिकतम २७ रुपैयाँ तिरे पुग्छ । तर उनीहरूले ३५ रुपैयाँदेखि ४० रुपैयाँसम्म भाडा लिएको यात्रुहरूको गुनासो छ । ४ किमि यात्रा गर्दा पनि २० देखि २५ रुपैयाँसम्म असुल गगर्ने गरेका छन् । यसरी खुलेआम यात्रु ठगिइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान किन पुगिरहेको छैन ? यसरी मनोमानी भाडा लिनेहरूलाई कानूनी कठघरामा ल्याई उनीहरूको यस्तो गलत हर्कतलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । प्रत्येक यात्रुवाहक बसमा यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको आधिकारिक भाडाको दर राख्ने कामलाई प्रकाभवकारी बनाईनुपर्छ । तोकिएको भाडा दर टाँसेको खण्डमा यात्रुले सचेत भएर भाडा तिर्ने तथा उनीहरूले प्रतिवाद गर्ने अवसर जुट्दैन । अर्कोतर्फ यात्रुहरुले पनि कानूनी उपचारका लागि कतै जाने फुर्सद नभएपनि आफू बस चढ्ने र आर्लने ठाउँको प्रहरी चौकी वा सडकमै खटिइरहेका ट्राफिक प्रहरीहरूमार्फत अन्यायको उजुरी दिने बानी बसाल्न पनि जरुरी छ । एउटा दुईटा यस्ता प्रयासहरु बाहिर आउन थाले भने सबैतिर यसको सकरात्मक प्रभाव पर्न सक्छ र उनीहरुको ठग्ने मनस्थितका कमी आउन सक्दछ । यसरी प्रहरीमा उजुरी दिनाले सम्बन्धित यात्रुवाहकमाथि कारवाही वा चेतावतीको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ र उनीहरूको यो हर्कत रोकिन पनि सक्छ ।
खुलेआम यात्रुलाई ठग्ने चालक तथा सहचालकलाई प्रभावकारी कारवाहीमार्फत कानूनी कठघरामा उभ्याउन जरुरी छ । विभागले ४ किलोमिटर दुरीको १५ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । ४ किलोमिटरबाट १९ किलोमिटर दुरी पार गर्दासम्म २६ रुपैयाँ र त्यो भन्दा बढी दुरीका लागि अधिकतम २७ रुपैयाँ तिरे पुग्छ । तर उनीहरूले ३५ रुपैयाँदेखि ४० रुपैयाँसम्म भाडा लिएको यात्रुहरूको गुनासो छ । ४ किमि यात्रा गर्दा पनि २० देखि २५ रुपैयाँसम्म असुल गगर्ने गरेका छन् । यसरी खुलेआम यात्रु ठगिइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान किन पुगिरहेको छैन ? यसरी मनोमानी भाडा लिनेहरूलाई कानूनी कठघरामा ल्याई उनीहरूको यस्तो गलत हर्कतलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।
DoSnOZ ungldaexfgsz, [url=http://cmlguohhuclk.com/]cmlguohhuclk[/url], [link=http://aybgasrswrjj.com/]aybgasrswrjj[/link], http://eqoutiyudtmi.com/